Boorama Ma Toostay: Hogaanka Ma Diiday | Somaliland.Org
Boorama Ma Toostay: Hogaanka Ma Diiday
April 29, 2008	Jawab: “Jaalyada reer Awdal ee MN oo ganafka ku dhufatay muddo kordhinta Riyaale”
Waa guul u soo hoyatay Jamhuuriya Somaliland in maanta baaq soo saaran Jaaliya reer Awdal ee gobolka Minesota ee dalka Maraykanka ay kaga dhiidhiyaan kana soo horjeedan mudo kordhinta sharcidarad ah ee ay guurtidu ugu kordhisay mudo hal sano Maxadwayne Riyaale. Waanag, nabad iyo hormarku umadu wuxuu ku yimaada markaa la ilaalayo shurucda dalka u taal. Hadaba haddii aan la ilaaliin disdoorka dalka u yaala iyo wax lagu heeshiyey waxaay noqonaysaa in aan lagu jirin laguna waari doonin nabad manta lagu faano ee aynu nidhaa waxaaynu kaga duwanahay gobo badan oo ku yaala geeska Africa. Inaagoo ah umad Muslim 100% waa in aynu ku sifoownaa in aynu noqono umad jecel wanaaga xumaanta iyo caadalad daradana ka soo horjeesta. Waxaa umadaha bababiya marka laysku taageero cadaalad darada xumaantan laysku diidiwaayo. Khasab maha in aad ka soo jeedidi xisbiyaada mucaaradka ah ee dawlada ka soo horjeeda si aad wax u saxdid xumaantan u diidid, waxaadse noqonkartaa ka ugu jecel Dawalada Riyaale, markaa ay xaqa ku tagan tahay waa inaynu taageerno kana celino kuwa ka soo horjeeda ee doonaya cadaalada darada in ay wax ku xaaliyan.
Marxaladan aynu galay maanta waa in ay Reer Awdal kow ka noqdaan in aay khaladka u sheegan Riyaale oo aanay ku taagerin mudo kordhinta sharci darada ah. Ruuntana u sheegan in ay tahay qayrul dastuuri oo aanay wafaqsaneen dasturka dalka u yaal. Waa in ay ruunta u sheegaan in u isagu ka masuul yahay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madamo u yahay masuulka ugu sareeyaa ee dalka ka taliya ee waliba la soo doortay, dalkana soo maamulayey mudo shan sanno ah oo uu xilka hayey oo ay arintu ahayd in uu umaada u diyaaro sidii ay doorasho xaalaal oo xaq ah u dhici lahayad. Runtaa ha loo sheego in u si xaq daro ah u xidhay Madaxdii Xisbiga Qaran ee doonayey in ay ka qayab galan doorashooyinka oo uu dastuurku u baneenayo in ay wax doortan lana dooran karo. Runta ha loo sheego in u si sharci daro ah u xid xidhay Madaxda Wargeeyska Haatuf markii ay dahaa ka roogeen musuq maasuqa ka jiraa dawlada. Runta ha loo sheego in aanay nimaanka afmiishaarinta ah ee ku xeerani xarunta madaxtooyada aanay waxba u taraynin marka ay arintu sii xumaato ee ay jar ka tuurayaan isaga iyo dalkaba. Runtaa ha loo sheego Gurtidu ma matasho dalka iyo dadkaba mana ah nimaan la soo doortay oo aadigana kugu kordhin karaa mudada madax tinimada. Runtaa haa loo sheego in uu xaq u leyahay in la dooran karo mar labad lana diido karo, haddii la diidaana si fiican u xilka u wareejo unaa garto in uu xilku yahay meerto dadka u dhexeeya. Runta ha loo sheegi in dadkii markii hore ku taageeri jiraay aanay manta ku tageeri doonin haddii laga dareemo kali talisnimo iyo cadaalad daro kuna sifowaaba kali taliye kursi ku doona xoog iyo xadhig.
Baaqyadan xumaan diidka ahi kana soo horjeeda mudo kordhina Riyaale ee sharcidarada ahi waxaay ku tusayasaa waaga cusub oo u baryay Boraama iyo dhaman gobolka Awdal oo aan odhan karo Borama way toostay xumaantan way diiday maadamo oo reer Borama yihiin hooyga aqoonta dalka.
Mustafe Haji Omar